सेक्स बारे प्रश्न गर्दा किन तर्किइन चाँदनी ? – Namaste Filmy
सेक्स बारे प्रश्न गर्दा किन तर्किइन चाँदनी ?
[dropcap]आ[/dropcap]उदो कात्तिक ७ गतेबाट प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘स्टुपिड मन’ बाट फिल्ममा डेब्यु गरेकी नायिका चाँदनी शर्मा सेक्स सम्बन्धि प्रश्न गर्दा एकाएक तर्किइन । अन्य बिषयमा खुलेर बोलेकी उनी किन सेक्स सम्बन्धि कुरा गर्न चाहन्नन ? त्यो उनी आफैलाई थाहा होला । तर हलिउड बलिउडको प्रभावले निकै उदार बनिसकेको नेपाली समाजमा चाँदनी सेक्स सँग तर्किनुलाई अर्थपुर्ण रुपमा लिन सकिन्छ ।
चाँदनीले एक अनलाइन पत्रिकालाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा सेक्स बारे बोल्न नचाहेकी हुन । उनले सेक्स के हो र बिहेअघि सेक्स जायज कि नाजायज भन्ने जिज्ञासामा भनिन- ‘माफ गर्नुहोला, म उत्तर दिन सक्दिन । अर्को प्रश्न प्लीज’ ।
प्रेमको बारेमा भने उनी खुलेकी छिन । उनले आफ्नो दर्शक शुभचिन्तक सबैसँग प्रेम रहेको र सबैलाई माया गर्ने बताउदैे कोहि बिशेष भने नभएको र आफु सिंगल नै खुशी रहेको बताइन । ‘स्टुपिड मनमा’ काम गर्दा निकै रमाइलो भएको र धेरै कुरा सिक्ने मौका मिलेको बताउदै उनले फिल्म पनि निकै राम्रो बनेको बताइन ।
उनी हाल जपानमा छिन । समाजसेवामा स्नातक गरेकी उनले फिल्म निर्माण कोर्स पनि पुरा गरेकी छिन । हाल अर्को कोर्सको तयारीमा लागेकाले स्टुपिड मनको प्रचारप्रसारमा भने समय दिन नपाएको उनले बताइन । चाँदनीको डेब्यु अभिनय रहेको ‘स्टुपिड मन’ यहि कात्र्तिक ७ गतेबाट रिलिज हुदैछ । फिल्ममा नायक जीवन लुइटेलसँग चाँदनीले अनस्कृन रोमान्स गरेका छन । निरज बराल, रिजु श्रेष्ठ, मार्टिन खान लगायतको पनि फिल्ममा अभिनय छ । फिल्मलाई दिवाकर भट्टराइले निर्देशन गरेका हुन ।
त्रिशुलीपत्र डटकम मा प्रकाशित अन्तरवार्ताको आधारमा ।
‘लज्जा’को नया गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित )
‘अलबिदा’मा आर्यनको यस्तो छ नयाँ लुक्स हेर्नुहोश (भिडियो सहित )